kakar October 13, 2021
တခါတုနျးက ဆေးသုတျသမားလေး တဦးဟာ အိမျတအိမျကို ဆေးသုတျဖို့ ရောကျသှားခဲ့တယျ။ အိမျထဲ ဝငျလိုကျတာနဲ့ မကျြစိကှယျနတေဲ့ အိမျရှငျယောကျြားကို တှတေ့ော့ ကရုဏာ သကျမိတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ မကျြစိ ကှယျနပေမေယျ့ ပြျောပြျောနတေတျလို့ ဆေးသုတျသမားနဲ့ ခဏအတှငျးမှာ ခငျမငျသှားကွတယျ။
ဆေးသုတျသမားလေးဟာ သူတို့အိမျမှာ ဆေးသုတျတဲ့ ရကျအတောအတှငျး သူတို့ စကားတှေ ဖောငျဖှဲ့ပွော ဆိုကွပမေယျ့ မကျြစိကှယျနတေဲ့ သူရဲ့ အားနညျးခကျြကို ဆေးသုတျသမား လုံးဝ မမေးခဲ့ဘူး။
ဆေးသုတျပွီးလို့ စာရငျးရှငျးတဲ့အခါမှာ ဆေးသုတျသမားက ဆေးသုတျခကို သတျမှတျထားတဲ့ ဈေးထကျ တဝကျ လြှော့ယူခဲ့တယျ။ အိမျရှငျမက ဘာဖွဈလို့ လြှော့ပေးရသလဲ လို့ မေးတော့ ဆေးသုတျသမားက..
" ခငျဗြား ယောကျြားနဲ့ စကား အတူပွောရတာ ကြှနျတျော အရမျးပြျောတယျ။ သူရဲ့ ဘဝအမွငျနဲ့ စိတျသဘောထားတှကွေောငျ့ ကြှနျတေျာ့အဖွဈက အဲဒီလောကျ မဆိုးသေးဘူး ဆိုတာ သိလာရတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူ့ကို ကြေးဇူးတငျတဲ့အနနေဲ့ ကြှနျတျော ဈေးလြှော့ယူ လိုကျတာပါ။ သူ့ကွောငျ့ အလုပျတှလေုပျရတာကို ပငျပနျးတယျလို့ ကြှနျတျော မမွငျတော့ဘူးဗြာ " လို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ။ အဲဒီနောကျ အိမျရှငျမ ကမျးပေးတဲ့ ဆေးသုတျခကို တဖကျတညျးသာ ရှိတဲ့လကျနဲ့ သူ လှမျးယူလိုကျတယျ။
ဖွဈလာတဲ့ဘဝ၊ ဖွဈလာတဲ့ ကံကွမ်မာကို ပွောငျးလဲလို့ မရရငျ ဘဝကိုကွညျ့တဲ့ ကိုယျ့အမွငျကို ပွောငျးလဲကွညျ့ပါ။ ပတျဝနျးကငျြကို ပွောငျးလဲလို့ မရရငျ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျအခွအေနကေို ပွောငျးလဲကွညျ့ပါ။
ပတျဝနျးကငျြနဲ့ လိုကျလြှောညီထှအေောငျ နလေို့မရရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျနကေိုယျဟနျ၊ စိတျသဘောထားကို ပွောငျးလဲကွညျ့ပါ။ အရာတခုအပျေါ မွငျတဲ့ ကိုယျ့အမွငျတှကေ အကောငျးလား? အဆိုးလား? ဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျသဘောထားပျေါမှာပဲ မှုတညျပါတယျ။
ပုံမှနျအခြိနျ အထကျကိုကွညျ့ ကွိုးစားပါ ။ စိတျဓါတျကနြခြေိနျ အောကျကိုကွညျ့ အားတငျးပါ။ သငျ ဒီစာကို လကျ ၂ ဖကျ နဲ့ကိုငျ စာဖတျနိုငျ မွငျနိုငျသေးလငျြ သငျ့မှာ ကွိုးစားခှငျ့ အမြားကွီး ရှိပါသေးသညျ။
တခါတုန်းက ဆေးသုတ်သမားလေး တဦးဟာ အိမ်တအိမ်ကို ဆေးသုတ်ဖို့ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိကွယ်နေတဲ့ အိမ်ရှင်ယောက်ျားကို တွေ့တော့ ကရုဏာ သက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ မျက်စိ ကွယ်နေပေမယ့် ပျော်ပျော်နေတတ်လို့ ဆေးသုတ်သမားနဲ့ ခဏအတွင်းမှာ ခင်မင်သွားကြတယ်။
ဆေးသုတ်သမားလေးဟာ သူတို့အိမ်မှာ ဆေးသုတ်တဲ့ ရက်အတောအတွင်း သူတို့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြော ဆိုကြပေမယ့် မျက်စိကွယ်နေတဲ့ သူရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဆေးသုတ်သမား လုံးဝ မမေးခဲ့ဘူး။ ဆေးသုတ်ပြီးလို့ စာရင်းရှင်းတဲ့အခါမှာ ဆေးသုတ်သမားက ဆေးသုတ်ခကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးထက် တဝက် လျှော့ယူခဲ့တယ်။
အိမ်ရှင်မက ဘာဖြစ်လို့ လျှော့ပေးရသလဲ လို့ မေးတော့ ဆေးသုတ်သမားက " ခင်ဗျား ယောက်ျားနဲ့ စကား အတူပြောရတာ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ်။ သူရဲ့ ဘဝအမြင်နဲ့ စိတ်သဘောထားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်အဖြစ်က အဲဒီလောက် မဆိုးသေးဘူး ဆိုတာ သိလာရတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဈေးလျှော့ယူ လိုက်တာပါ။ သူ့ကြောင့် အလုပ်တွေလုပ်ရတာကို ပင်ပန်းတယ်လို့ ကျွန်တော် မမြင်တော့ဘူးဗျာ " လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် အိမ်ရှင်မ ကမ်းပေးတဲ့ ဆေးသုတ်ခကို တဖက်တည်းသာ ရှိတဲ့လက်နဲ့ သူ လှမ်းယူလိုက်တယ်။
ဖြစ်လာတဲ့ဘဝ၊ ဖြစ်လာတဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲလို့ မရရင် ဘဝကိုကြည့်တဲ့ ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲလို့ မရရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျှောညီထွေအောင် နေလို့မရရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်နေကိုယ်ဟန်၊ စိတ်သဘောထားကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။
အရာတခုအပေါ် မြင်တဲ့ ကိုယ့်အမြင်တွေက အကောင်းလား? အဆိုးလား? ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်သဘောထားပေါ်မှာပဲ မှုတည်ပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန် အထက်ကိုကြည့် ကြိုးစားပါ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန် အောက်ကိုကြည့် အားတင်းပါ။ သင် ဒီစာကို လက် ၂ ဖက် နဲ့ကိုင် စာဖတ်နိုင် မြင်နိုင်သေးလျင် သင့်မှာ ကြိုးစားခွင့် အများကြီး ရှိပါသေးသည်။